ခြေသလုံးကြီးသူတွေအတွက် ခြေသလုံးသွယ်လျစေမယ့် အထိရောက်ဆုံး လေ့ကျင့်ခန်း (၆)မျိုး - TheeSayChin
ခြေသလုံးကြီးသူတွေအတွက် ခြေသလုံးသွယ်လျစေမယ့် အထိရောက်ဆုံး လေ့ကျင့်ခန်း (၆)မျိုး
Image by engin akyurt from Pixabay Sponsored
လက်နှစ်ဖက်က အလေးတုံး ဒါမှမဟုတ် ရေသန့်ဘူးသေးတစ်ဘူးစီ ကိုင်ပြီး ခြေစုံရပ်ပါ။ နေရာမှာတင် ခြေဖျားထောက်လိုက်၊ ပြန်ချလိုက် အခါ (၂၀) လုပ်ပေးပါ။
လက်နှစ်ဖက်က အလေးတုံး ဒါမှမဟုတ် ရေသန့်ဘူးသေးတစ်ဘူးစီကိုင်ပြီး ခြေဖျားထောက်ပြီး တစ်မိနစ်လောက်လမ်းလျှောက်ပေးပါ။ ခန နားပြီး နောက်ထပ် တစ်မိနစ်ထပ်လျှောက်ပေးပါ။
လှေကားပေါ် ပြေးတက်တာကို ၁၀ မိနစ်လောက်လုပ်ပေးရမှာပါ။ လှေကားရှိတဲ့နေရာတိုင်းလုပ်လို့ရတာကြောင့် လွယ်ကူတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှုလည်း အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခြေကျင်းဝတ်အဆစ်လွဲဖူးသူ၊ ဒူးနာတတ်တဲ့သူတွေကတော့ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။
လက်နှစ်ဖက်က အလေးတုံး ဒါမှမဟုတ် အလေးချိန်ရှိတဲ့တစ်ခုခုကို ကိုင်ပြီး လမ်းလျှောက်ပေးရမှာပါ။ ခြေဖျားထောက်စရာမလိုဘဲ ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြောင့်ဖြောင့်ထားပြီး ရှေ့တည့်တည့်ကိုကြည့်ပြီးလျှောက်ပေးရုံပါပဲ။ ၁၅ မိနစ်လောက် လျှောက်ပေးရုံနဲ့ထိရောက်မှုရှိတာကို တွေ့ရမှာပါ။
ကြိုးခုန်တာက ခြေသလုံးတွေကို လှပစေရုံတင်မကဘဲ နှလုံးကျန်းမာရေးကိုလည်းကောင်းစေတာကြောင့် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့သီချင်းလေးဖွင့်ပြီး မိနစ်နှစ်ဆယ်လောက်ကြိုးခုန်ပေးလိုက်ပါလို့။
READချစ်သူကို ကိုယ်တတ်နိုင်သမျှလေးနဲ့ အစွမ်းကုန်ချစ်ပေးတဲ့ ချစ်သူကောင်လေးတွေဆိုတာ ဒီလိုပါ….
ပုံမှာပြထားသလို နေလိုက်ပြီး ခြေထောက်တွေကို တောင်တက်သလိုမျိုး လုပ်ပေးရမှာပါ။ ခြေထောက်တစ်ချောင်းကို ရင်ဘတ်နားကိုကပ်လိုက်ပြီး အနောက်ဘက်ပြန်လှမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ နောက်ခြေထောက်တစ်ဖက်ကို ရင်ဘတ်နားကပ်လိုက်ပြီး အနောက်ဘက်လှမ်းတဲ့ပုံစံမျိုး တလှည့်စီလုပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။
တဈကိုယျလုံးလှနပေါပွီဆိုမှ ခွသေလုံးတှမှေ တုတျနလေို့ ကိုယျ့ကိုယျကို ယုံကွညျမှုမရှိဖွဈနတေဲ့ သူလေးတှေ ရှိနလေား။ ခွသေလုံးကိတျနတောလေးကို သှယျလသြှားစမေယျ့ အလှယျဆုံးလကေ့ငျြ့ခနျးလေးတှကေို အခုပဲကွညျ့ပွီး ဒီနကေ့စလို့ နတေို့ငျးလုပျလိုကျတော့နျော။
လကျနှဈဖကျက အလေးတုံး ဒါမှမဟုတျ ရသေနျ့ဘူးသေးတဈဘူးစီ ကိုငျပွီး ခွစေုံရပျပါ။ နရောမှာတငျ ခွဖြေားထောကျလိုကျ၊ ပွနျခလြိုကျ အခါ (၂၀) လုပျပေးပါ။
လကျနှဈဖကျက အလေးတုံး ဒါမှမဟုတျ ရသေနျ့ဘူးသေးတဈဘူးစီကိုငျပွီး ခွဖြေားထောကျပွီး တဈမိနဈလောကျလမျးလြှောကျပေးပါ။ ခန နားပွီး နောကျထပျ တဈမိနဈထပျလြှောကျပေးပါ။
လှကေားပျေါ ပွေးတကျတာကို ၁၀ မိနဈလောကျလုပျပေးရမှာပါ။ လှကေားရှိတဲ့နရောတိုငျးလုပျလို့ရတာကွောငျ့ လှယျကူတဲ့လေ့ကငျြ့ခနျးဖွဈပွီး အကြိုးသကျရောကျမှုလညျး အရမျးကောငျးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ခွကေငျြးဝတျအဆဈလှဲဖူးသူ၊ ဒူးနာတတျတဲ့သူတှကေတော့ ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးကို မလုပျသငျ့ပါဘူး။
လကျနှဈဖကျက အလေးတုံး ဒါမှမဟုတျ အလေးခြိနျရှိတဲ့တဈခုခုကို ကိုငျပွီး လမျးလြှောကျပေးရမှာပါ။ ခွဖြေားထောကျစရာမလိုဘဲ ခန်ဓာကိုယျကိုဖွောငျ့ဖွောငျ့ထားပွီး ရှတေ့ညျ့တညျ့ကိုကွညျ့ပွီးလြှောကျပေးရုံပါပဲ။ ၁၅ မိနဈလောကျ လြှောကျပေးရုံနဲ့ထိရောကျမှုရှိတာကို တှရေ့မှာပါ။
ကွိုးခုနျတာက ခွသေလုံးတှကေို လှပစရေုံတငျမကဘဲ နှလုံးကနျြးမာရေးကိုလညျးကောငျးစတောကွောငျ့ ကိုယျကွိုကျတဲ့သီခငျြးလေးဖှငျ့ပွီး မိနဈနှဈဆယျလောကျကွိုးခုနျပေးလိုကျပါလို့။
READခဈြသူကို ကိုယျတတျနိုငျသမြှလေးနဲ့ အစှမျးကုနျခဈြပေးတဲ့ ခဈြသူကောငျလေးတှဆေိုတာ ဒီလိုပါ….
ပုံမှာပွထားသလို နလေိုကျပွီး ခွထေောကျတှကေို တောငျတကျသလိုမြိုး လုပျပေးရမှာပါ။ ခွထေောကျတဈခြောငျးကို ရငျဘတျနားကိုကပျလိုကျပွီး အနောကျဘကျပွနျလှမျးလိုကျတဲ့အခြိနျမှာ နောကျခွထေောကျတဈဖကျကို ရငျဘတျနားကပျလိုကျပွီး အနောကျဘကျလှမျးတဲ့ပုံစံမြိုး တလှညျ့စီလုပျပေးလိုကျရုံပါပဲ။
← တစ်ခါတစ်လေ အရေပြားပေါ်မှာ အညိုအမည်းကွက်တွေ ဘာကြောင့် ပေါ်လာတာလဲ ….
ကြက်သီးထဖွယ်ရာရှုခင်းတွေနဲ့ ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးမိုးမျှော်တိုက်ကြီး ၇ ခုအကြောင်း →
အကြီးအကျယ်အောင်မြင်ခဲ့ပေမယ့်လည်း သီဆိုသူ Idol တွေကိုယ်တိုင်က အကြိုက်မတွေ့ခဲ့ကြတဲ့ သီချင်းများ
ဘဲလေးအက သင်နေပြီဖြစ်တဲ့ ဖူးစုံတူမလေး အခရာ